Puntland & Galmudug oo xabsiga dhigay 20 looga shakiyey iney ka tirsan yihiin Alshabaab – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
31st March 2014 A warsame Af Soomaali 0
Garowe – Mareeg.com: Ciidamada amniga maamullada Puntland iyo Galmudug ayaa qabtay ilaa 21 ruux oo lagu eedeeyey in ey ka tirsan yihiin Alshabaab.
Ciidamada amaanka maamulka Puntland ayaa 48-dii saac ee la soo dhaafay waxay howlgalo lagu beegsanayey rag ka tirsan ururka Al-shabaab ay ka fuliyeen magaalooyinka Garoowe, Galkacayo iyo Baasaaso.
Wasiirka amniga Puntland, Xasan Cismaan Maxamuud “Aloore” oo maanta shir jaraa’id ku qabtay magaalada Garoowe ayaa ka war-bixiyey howlgaladaas oo lagu qabtay ilaa 20 ruux oo la sheegay in ay ka tirsan yihiin Alshabaab.
“Ciidamadu waxaa ay howl-galadaas ku qabteen ilaa 20 ruux, waxeyna howlka fuliyeen iyagoo kaashanaya shacabka sharafta leh ee reer Puntland” ayuu yiri wasiir Aloore.
“Waxaa sidoo kale howlgalka lagu qabqabtay qalab iyo agab kale oo ay wateen dadkii lasoo xiray, kuwaas oo doonayey inay fuliyaan falal argagixiso oo ka dhan ah dowladda iyo shacabka reer Puntland.” ayuu yiri wasiirka Amniga, Xasan Cismaan Aloore.
Bambooyin, fiilooyin iyo qalab kale oo ah kuwa qaraxyada lagu abaabulo oo lagu qabtay howlgal laga fuliyey Garoowe saacadihii ayaa lagu soo bandhigay shirka jaraa’id.
Wasiirka amniga Puntland Xasan Cismaan Aloore wuxuu sheegay in howlgaladu weli socdaan isla markaasna hay’adaha amniga gaar ahaan qaybtooda baarista ay weli wadaan baaritaano iyo macluumaad aruurin la xiriirta raggaas.
“Baaristu markay soo dhamaato waxaan u soo bandhigi doonnaa shacabka reer Puntland iyo Caalamka.” ayuu yiri Aloore
Dhanka kale, maamulka Galmudug iney qabteen nin la sheegay in uu xiriir la lee yahay Al-Shabaab. Taliyaha qeybta booliska gobolka Mudug ee maamulka Galmudug, Maxamed Nuur Cali Gadaar oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in ninka laga soo qabtay duleedka Gaalkacyo, kaddib markii ay ka war heleen inuu ku sugan yahay.
Ka hor inta aan la soo qaban ciidamada booliska maamulka Galmudug ayaa howgalo ka sameeyay xaafadda uu joogay ee laga soo qabtay ninka.
Ninkan ayaa markii la soo qabtay lagu xiray saldhigga booliska, waxaana hadda ku socda baaritaan kaddibna waxaa loo gudbin doona maxkamad, siddaas waxaa sheegay Taliyaha qeybta booliska gobolka Mudug.
Maamullada Puntland iyo Galmudug ayaa sheegay iney ku dedaalayaan sidii aysan deegaanadooda u tegi laheyn dagaalyahanno ka tirsan Alshabaab oo ka baxay koonfurta Soomaaliya.